बुधबार, ३१ असार २०७७, १० : ५०
बाल पूजारी राख्ने अनौठो प्रथा
​ पाटन दरबार क्षेत्रबाट ३ सय ५० मिटर भित्र छ, हिरण्यवर्ण महाविहार अर्थात गोल्डेन टेम्पल । यसलाई ललितपुर जिल्लाकै पुरानो र धनी विहार मानिन्छ । ... ...
... अनि जलाईदिएँ मनुस्मृति
​ हामी सँगै गाउँभरी टीका थाप्न जान्थ्यौं । उसलाई सबैले टीका लाएर पैसा दिन्थे, ढोगिदिन्थे । तर मलाई भने कसैले पैसा दिदैँनथे । ... ...
​ गौरीलाई गुमाएपछि, काठमाण्डौ बस्ने मन मरेर गयो । अन्नत छोरीहरु बोकेर राष्ट्रकवि जन्म थलो फर्किनुभयो । ... ...
गौरी वियोगका त्यी दिन
​ उहाँले आँखाभरि आसु पार्दै, उनै गौरीको सम्झनामा लेखिएको गौरी खण्डकाब्यको प्रसंग उठाउनु भयो । लेखौ भनेर लेखिएको हैन्, मसीले लेखिएको पनि हैन्, गौरी खण्डकाब्य आँसुले लेखिएको हो, शब्दले खेलिएको त हैन भावनाले लेखिएको हो । ... ...
काठमाडौंको त्यो बयान ...
​ काठमाडौंमा त गुरुको पनि गुरु छन् भनेपछि बढो अचम्म ! अनि साना र फुच्चा घर त्यो पनि पातला तर काठमाडौंमा त बाक्ला र ठुला घर भनेपछि, पत्याउनै गाह्रो ! मन्दीरहरु त सुनै सुनका हुन्छन् भन्ने सुनेपछि झनै अहिल्यै जाउँजस्तो लाग्थ्यो ।’ ... ...
ज्वाइँ, यो छोरी तीजमा माइत नगएको धेरै भयो, अहिले त पठाउनुस् है
​ अब मेरो जीउ छन्जनीला अघिदेखीको चलन मैले छोड्दिन" भन्दै घुटुक्क पानी पिउँदै निस्तो भात किक्लिक किक्लिक निलीरहेको देख्दा अनायास मेरा आँखामा आँशु आए । मैले आमाको धोतीको सप्को तानेर जिज्ञासु आँखाले आमालाई हेरें । उहाँले मेरो अँधेरो अनुहार देखेर सम्झाउँदै भन्नु भो - "छोरीचेलीका घर्को अन्न, नून खान हुन्न भनेर बाले हाम्रो घरको अन्न नखानएको हो" । ... ...
​ चलचित्र ‘जुनी’को छाँयाकनका लागि सम्पूर्ण टोली भारतबाट आएको थियो । प्राविधिक मात्र होइन मेकअपम्यान समेत भारतबाटै झिकाउनु पथ्र्यो । सबैले हिन्दी बोल्ने भएकाले पहिलो फिल्म खेल्दा भुवनलाई भाषाको निकै समस्या परेको थियो । ... ...